Ropa Unganidzo Inaliti, Laborator Consumable, Urine Container - Kang Weishi
Shijiazhuang Kang Weishi Medical yakagadzwa muna 2014 sekambani inogadzira uye yekutengesa. Isu tiri timu ine simba uye tinosarudza zvakanaka zvigadzirwa kuti zvipe kune vatengi vedu.
Vacuum ropa rekuunganidza tube
Iko kuunganidza kwevakadzi vacuum venous samples ndiko kusimudzira kukuru pane zvetsika tsika yekuunganidza ropa. Nekuti nzira yekuunganidza ropa inopedzwa pasi pehurongwa hwakavharirwa zvizere, mukana wekusvibiswa neropa uye nemuchinjiro-wehutachiona hausarudzirwe kunze; uye nekuda kwechimiro chayo chiri nyore uye nyore kushandisa, zviri nyore kutungamidza nekusimudzira.
Micro ropa rekuunganidza machubhu
Micro chubhu yekuunganidza ropa: yakakodzera kuunganidzwa kweropa muvachangozvarwa, vacheche, varwere vanokundikana munzvimbo dzinochengetwa zvakanyanya, uye vanopisa varwere vasina kukodzera kuunganidzwa kweropa venous.
Iyi yega yega ropa sampuli yekuunganidza system inosanganisa queiding, smart chupa kusarudzwa, kudhindisa kweshinda, kufambisa uye kugovera. Sisitimu iyi yakabatana neyechipatara LIS / HIS network, inoverenga kadhi yekurapa yemurwere, inowana pakarepo ruzivo rwakanangana nemurwere uye zvinhu zvemuedzo, uye inoshandura tsika dzekurekodha neyekutsikisa.
Iyo yakakodzera kuunganidzwa, kufambisa uye kuchengetedza samples yehutachiona. Chengetedza hutachiona munzvimbo yakachengeteka uye kwenguva refu.
Shijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co, Ltd yakagadzikwa muna 2013, iri kuNo95, Yuanshi County, Shijiazhuang Guta, Hebei Province, Iyi fekitori ingangoita yenyika hombe hombe 107, Kambani yedu ndeyazvino inogadzira eropa yekuunganidza ropa machubhu uye zvekushandisa zvinorapwa. Kambani yedu inokoshesa bhizinesi tsika uye yakakwira mhando uye inovavarira kuvaka zvigadzirwa nemhando yepamusoro. Isu tinotevera zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye sevhisi yevanyanzvi vekuongorora nyika dzese uye tinoshuvira kupa akavimbika mhando yehutano hwekuongororwa kwehutano.
Watova neyako CE uye ISO 13485 zvitupa
Gamuchira OEM & ODM sevhisi
Mitsara mina yekugadzira kuti uchengetedze yakakura kubuda.
Bata muzviratidziro zvinozivikanwa muindastiri, seCMEF, MEDICA, ARAB HEALTH, nezvimwe.
Kunyanya kuMid East. Africa, South America, Southeast Asia uye South Asia.